Miverina misokatra ny fiangonana ny Alahady 06 Jona 2021 – FJKM Ambavahadimitafo Miverina misokatra ny fiangonana ny Alahady 06 Jona 2021 |
Miverina misokatra ny fiangonana ny Alahady 06 Jona 2021
Publié le 01 juin 2021 à 11:06
Misaotra ny Tompo isika fa miverina misokatra ny Fiangonana.
Toy izao ny tsara ho fantatra :
1 – Misokatra isika amin’ny alahady 06 jona 2021 ho avy izao.
2 – Hisy fidirana indroa :
3 – Tsy misy fisoratana anarana.
4 – Tsy mbola misy fianarana katekomena sns…
5 – Tsy mbola misy fandraisana ny fanasan’ny Tompo.
6 – Hajaina ny fepetra ara-pahasalamana.
7 – Aoka hifampitondra am-bavbaka hatrany isika
Mirary soa ho tahian’ny Tompo